गोपनीयता नीति - inShop
inShop को लागि गोपनीयता नीति
InShop को लागि यो गोपनीयता सूचना InstaVC Inc. द्वारा संचालित (" कम्पनी," "हामी," "हामी," वा "हाम्रो" ), हामीले कसरी र किन सङ्कलन, भण्डारण, प्रयोग, र/वा साझेदारी ("प्रक्रिया") गर्न सक्छौं भनेर वर्णन गर्दछ। तपाईंले हाम्रा सेवाहरू ("सेवाहरू") प्रयोग गर्दा तपाईंको जानकारी, जस्तै तपाईंले:
हाम्रो वेबसाइट https://www.inshop.vc मा जानुहोस्, वा हाम्रो कुनै पनि वेबसाइट जुन यो गोपनीयता सूचनामा लिङ्क छ।
हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन (इनशप) डाउनलोड गरी प्रयोग गर्नुहोस्, वा यो गोपनीयता सूचनासँग लिङ्क गर्ने हाम्रो कुनै पनि अन्य अनुप्रयोग।
कुनै पनि बिक्री, मार्केटिङ, वा घटनाहरू सहित अन्य सम्बन्धित तरिकाहरूमा हामीसँग संलग्न हुनुहोस्
प्रश्न वा चिन्ता? यो गोपनीयता सूचना पढ्दा तपाईंलाई आफ्नो गोपनीयता अधिकार र छनौटहरू बुझ्न मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईं हाम्रा नीति र अभ्यासहरूसँग सहमत हुनुहुन्न भने, कृपया हाम्रा सेवाहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। यदि तपाइँसँग अझै पनि कुनै प्रश्न वा चिन्ता छ भने, कृपया हामीलाई vc@inshop.vc मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
inShop ले लग फाइलहरू प्रयोग गर्ने मानक प्रक्रिया पछ्याउँछ। यी फाइलहरूले आगन्तुकहरू लगाउँछन् जब तिनीहरू वेबसाइटहरू भ्रमण गर्छन्। सबै होस्टिङ कम्पनीहरूले यो गर्छन् र होस्टिङ सेवाहरूको विश्लेषणको अंश हो। लग फाइलहरूद्वारा सङ्कलन गरिएको जानकारीमा इन्टरनेट प्रोटोकल (IP) ठेगानाहरू, ब्राउजरको प्रकार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP), मिति र समय स्ट्याम्प, सन्दर्भ/निकास पृष्ठहरू, र सम्भवतः क्लिकहरूको संख्या समावेश छ। यी व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गर्न सकिने कुनै पनि जानकारीसँग जोडिएका छैनन्। जानकारीको उद्देश्य प्रचलनहरूको विश्लेषण, साइट व्यवस्थापन, वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताहरूको आन्दोलन ट्र्याक गर्ने, र जनसांख्यिकीय जानकारी सङ्कलन गर्ने हो।
कुकीहरू र वेब बीकनहरू
कुनै पनि अन्य वेबसाइट जस्तै, inShop 'कुकीज' प्रयोग गर्दछ। यी कुकीहरू आगन्तुकहरूको प्राथमिकताहरू, र आगन्तुकले पहुँच गरेको वा भ्रमण गरेको वेबसाइटमा पृष्ठहरू सहित जानकारी भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ। जानकारी आगन्तुकहरूको ब्राउजर प्रकार र/वा अन्य जानकारीमा आधारित हाम्रो वेब पृष्ठ सामग्री अनुकूलन गरेर प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवलाई अनुकूलन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Google DoubleClick DART कुकी
गुगल हाम्रो साइटमा तेस्रो-पक्ष विक्रेता मध्ये एक हो। यसले हाम्रो साइट आगन्तुकहरूलाई www.website.com र इन्टरनेटमा अन्य साइटहरूको भ्रमणको आधारमा विज्ञापनहरू प्रदान गर्न DART कुकीहरू भनेर चिनिने कुकीहरू पनि प्रयोग गर्दछ। यद्यपि, आगन्तुकहरूले निम्न URL मा Google विज्ञापन र सामग्री नेटवर्क गोपनीयता नीति भ्रमण गरेर DART कुकीहरूको प्रयोग अस्वीकार गर्न छनौट गर्न सक्छन् - https://policies.google.com/technologies/ads
हाम्रा विज्ञापन साझेदारहरू
हाम्रो साइटमा केही विज्ञापनदाताहरूले कुकीहरू र वेब बीकनहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। हाम्रा विज्ञापन साझेदारहरू तल सूचीबद्ध छन्। हाम्रा प्रत्येक विज्ञापन साझेदारहरूको प्रयोगकर्ता डेटामा तिनीहरूको नीतिहरूको लागि आफ्नै गोपनीयता नीति छ। सजिलो पहुँचको लागि, हामीले तल उनीहरूको गोपनीयता नीतिहरूमा हाइपरलिङ्क गरेका छौं।
तपाइँ inShop को प्रत्येक विज्ञापन साझेदार को लागी गोपनीयता नीति फेला पार्न यो सूची परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट गर्नुहोस् कि inShop को यी कुकीहरूमा पहुँच वा नियन्त्रण छैन जुन तेस्रो-पक्ष विज्ञापनदाताहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ।
तेस्रो पक्ष गोपनीयता नीतिहरू
inShop को गोपनीयता नीति अन्य विज्ञापनदाता वा वेबसाइटहरूमा लागू हुँदैन। तसर्थ, हामी तपाईंलाई थप विस्तृत जानकारीको लागि यी तेस्रो-पक्ष विज्ञापन सर्भरहरूको सम्बन्धित गोपनीयता नीतिहरू परामर्श गर्न सल्लाह दिइरहेका छौं। यसमा तिनीहरूको अभ्यासहरू र निश्चित विकल्पहरूबाट कसरी अप्ट-आउट गर्ने भन्ने बारे निर्देशनहरू समावेश हुन सक्छन्।
तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत ब्राउजर विकल्पहरू मार्फत कुकीहरू असक्षम गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष वेब ब्राउजरहरूसँग कुकी व्यवस्थापनको बारेमा थप विस्तृत जानकारीको लागि, यो ब्राउजरको सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। कुकीहरू के हुन्?
हाम्रो प्राथमिकताको अर्को भाग भनेको इन्टरनेट प्रयोग गर्दा बालबालिकाका लागि सुरक्षा थप्नु हो। हामी आमाबाबु र अभिभावकहरूलाई उनीहरूको अनलाइन गतिविधि अवलोकन गर्न, सहभागी हुन र/वा निगरानी गर्न र मार्गदर्शन गर्न प्रोत्साहन गर्छौं।
inShop ले 13 वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूबाट जानाजानी कुनै पनि व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारी सङ्कलन गर्दैन। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँको बच्चाले हाम्रो वेबसाइटमा यस प्रकारको जानकारी उपलब्ध गराएको छ भने, हामी तपाइँलाई तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्न दृढतापूर्वक प्रोत्साहन दिन्छौं र हामी हाम्रो रेकर्डबाट यस्तो जानकारी तुरुन्तै हटाउनको लागि सक्दो प्रयास गर्नेछौं।
अनलाइन गोपनीयता नीति मात्र
यो गोपनीयता नीति हाम्रो अनलाइन गतिविधिहरूमा मात्र लागू हुन्छ र हाम्रो वेबसाइटमा आगन्तुकहरूका लागि तिनीहरूले साझेदारी गरेको र/वा inShop मा सङ्कलन गरेको जानकारीको सन्दर्भमा मान्य छ। यो नीति यस वेबसाइट बाहेक अफलाइन वा च्यानलहरू मार्फत सङ्कलन गरिएको कुनै पनि जानकारीमा लागू हुँदैन।
हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाईले हाम्रो गोपनीयता नीतिमा सहमति जनाउनुहुन्छ र यसको नियम र सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्छ।
तपाईं यस सूचनाको बारेमा हामीलाई कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईंसँग यस सूचनाको बारेमा प्रश्न वा टिप्पणीहरू छन् भने, तपाईंले हामीलाई vc@inshop.vc मा वा पोष्टद्वारा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ:
99 S Almaden Blvd # 600,
सान जोस, CA 95173